The Galaxy S7 na S7 Edge ugbua nwere August nche melite dị | Gam akporosis
Dị ka ọnụ na-eme ememe afọ na ahịa, ọtụtụ emepụta na-ahọrọ na-aga nta nke nta, na-ahapụrụ gị n’enweghị mmelite ndị bụ isi, ịnọgide na-enwe, n'ọtụtụ ọnọdụ, ndị metụtara nchekwa nke ọnụ. Ruo ọnwa ole na ole, Samsung gbanwere usoro mmelite nke Galaxy S7 na S7 Edge, na-aghọ nke ọ bụla.
Nke mbụ n’ime ha dị ugbu a na kwekọrọ na ọnwa nke August 2019 ma dị site OTA (N'ime ikuku) n'ọtụtụ mba Europe gụnyere, na mgbakwunye na Spain, France, Poland, United Kingdom, Belgium, Austria, Ireland, Portugal, Greece, Holland, Switzerland, Croatia, Italy na Germany.
N'oge a, ọ dị ka ọdụ niile Vodafone kesara na Europebụ ndị mbụ natara mmelite kwekọrọ, ma a ga-eche na n’awa ole na ole sochirinụ, ndị fọrọ nke a na-ere n’efu na mba ndị a dị na Europe ga-eme nke a.
Galaxy S7 na S7 Edge nwere afọ 4 nke ndụ, yabụ ọ bụ ozi ọma magburu onwe ya ịhụ ka ụlọ ọrụ Korea nke Samsung gara n'ihu na-emelite ya, ọ bụ ezie na ọ bụ ọnwa atọ ọ bụla. Ọ bụrụ na ị bụ onye nwe otu ọnụahịa ndị a, ị nwere ike ichefu ịhụ otu esi emelitere ha gam akporo Pie yana interface UI n'otu na ụdị ndị a.
Ihe nchebe a na-edozi nsogbu nchekwa nke ụlọ ọrụ Korea hụrụ na Nhazi nke onwe nke ebe obibi gi. Ọ bụrụ n'ịchọrọ imelite ọdụ gị, ị ga-aga Ntọala na mmelite sistemụ.
Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịme ndabere ọnụ tupu ịga n'ihu ịwụnye mmelite ahụ. Ọ bụ ezie na oge 99% anaghị enwekarị mmejọ, ị maghị. Ọ bụrụ na nke a emee, anyị ga-atụfu ọdịnaya niile anyị chekwara na ọdụ anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Galaxy S7 na S7 Edge enweelarị mmelite nche nke August dị